Jiuqu Hongmei ee Galbeedka Galbeedka Gongfu Soo -saaraha Shaaha Madow iyo Alaab -qeybiye | Maokun
Jiuquhongmei waxaa loogu yeeraa "Jiuquhong", oo ah badeecad kale oo weyn oo soo jireen ah oo ku taal Degmada Xihu iyo hanti ka dhexaysa shaaha madow. Udgoonku wuxuu leeyahay caraf udgoon macaan oo udgoon leh iyo caraf udgoon, maraqa shaaha waa macaan oo jilicsan, wuxuu leeyahay dhumuc gaar ah, wuxuu leeyahay cuncun yar oo afka ah, wuxuuna leeyahay astringency yar. Cabbidda ka dib, afku waa iska qabow. Cusub oo qurux badan, sida inaad aragto naag Jiangnan macaan ah.
Jiuqu Hongmei Asalkiisa
Shaaha tubta cas ee Jiuqu waxaa laga soo saaraa wabiga Qiantang, aagagga Hubu, Shangbao, Zhangyu, Fengjia, Shejing, Shangyang, iyo Renqiao oo ku yaal xaafadaha koonfur -galbeed ee Hangzhou. Waxaa lagu magacaabaa Jiuqu Oolong wuxuuna ka tirsan yahay qaybta shaaha madow.
Habka wax soo saarka tubta cas ee Jiuqu
Heerka qaadista tubta cas ee Jiuqu waxay u baahan tahay hal buro iyo laba caleemo inay koraan; waxaa lagu farsameeyaa iyada oo engegta, rogid, halsano, dubista iyo hababka kale.
Markay jiraan xaalado gaar ah, caleemaha cusub ee engega ayaa si siman u lumi doona qaddarkii biyaha, si xoogga bararka unuggu u yaraado, oo tayada caleenku u noqoto mid jilicsan, taas oo ku habboon in loo rogo guluubyada, iyadoo la abuurayo xaalado jireed oo duubitaan ah. Biyaha oo yaraada, unugyada caleenta ayaa si tartiib tartiib ah isugu uruursada waxaana sii kordhaya hawlaha enzyme, taasoo keenta isbeddel kiimiko ah oo ku jira waxyaabaha ku jira, abuuraya xaalado kiimiko oo halsano ah, iyo faafinta gaaska cawska.
Ujeeddada duubitaanku waa in caleemaha engegay loo rogo falliiqyada ficilka xoogga farsamada, si buuxda loo burburiyo unugyada unugyada caleemaha, buuxsamaan casiirka shaaha, oo laga sameeyo oksaydhka polyphenol ee caleentu la xidhiidho xeryahooda polyphenol, oo la isticmaalo Ficilka oksijiin ee hawada si kor loogu qaado Marka halsano sii socoto, sababtoo ah casiirka shaaha ee la cajiimay ayaa ku urursan dusha caleenka, marka caleemaha shaaha la diyaariyo, walxaha milma waxay ku milmaan maraqa shaaha si loo kordhiyo xoojinta maraqa shaaha .
Halsanimadu waa engegnaan caadi ah. Iyada oo ku saleysan rogid, waa furaha sameynta midabka iyo udugga shaaha madow. Waa habka ugu weyn ee caleenta cagaaran ee isbeddelka cas, wuxuu kor u qaadaa firfircoonaanta enzymes, wuxuu kor u qaadaa uumiga oksaydhka ee polyphenols, wuxuuna sameeyaa midabka iyo dhadhanka shaaha madow. Xaaladaha deegaanka ee ku habboon, caleemaha si buuxda ayaa loo qallajin karaa, waxay yarayn karaan urta cagaaran iyo midabka, waxayna soo saaraan caraf xoog leh.
Waqtigan xaadirka ah, mashiinnada qallajinta ee Maocha ee sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah qalajiyayaal otomaatig ah, qalajiyaha gacmaha iyo baqashada qallajinta. Nooca labaad ee shaaha madow laba jeer ayuu engejiyaa, qalajinta koowaad waxaa la yiraahdaa Mao Huo, dhexda si habboon baa loo fidiyaa oo la qalajiyaa, qallajinta labaadna waxaa la yiraahdaa Foot Huo. Maohuo wuxuu maamulaa mabda'a heerkulka sare iyo deg -degga, wuxuu horjoogsadaa waxqabadka enzyme, wuxuu lumiyo qoyaanka caleemaha, wuxuuna si habboon u fidiyaa dhexda si uu u sameeyo qoyaanka caleemaha. Dib -u -qaybi si aad uga fogaato qalalan dibedda iyo gudaha qoyan, laakiin faafitaanku waa inuusan noqon mid aad u qaro weyn oo waqtigu uusan noqon mid aad u dheer, haddii kale waxay saamayn xun ku yeelan doontaa tayada. Mabda'a heer -kulka hooseeyo iyo dubitaanka qunyar -socodka ah ayaa lagu maamuli doonaa dabka cagta, oo qoyaanka ayaa si aan kala go 'lahayn loo uumi -bixin doonaa si loo sameeyo udugga.
Hore: Shaaha Dianhong Gongfu wuxuu ka tirsan yahay qaybta shaaha madow
Xiga: Qimen Black Tea Premium Qi Hong Jinzhen 2021 Shaah Cusub
Shaaha Dianhong Gongfu waxaa iska leh ca shaaha madow ...
Lapsang Souchong Shaaha Madow Harney & Wiilasha F ...